Nampiato Ny Famokarana Noho Ny Fitokonana Ny Toeram-pitrandrahana Varahina Escondida · Global Voices teny Malagasy
Nampiato Ny Famokarana Noho Ny Fitokonana Ny Toeram-pitrandrahana Varahina Escondida
Voadika ny 17 Oktobra 2017 3:24 GMT
(Marihina fa tamin'ny 19 Aogositra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nahatonga ireo mpiasa ao amin'ny orinasa varahina lehibe manerana izao tontolo izao hanomboka fitokonana 12 andro lasa izay ny fiakaran'ny vidin'ny varahina iraisampirenena. Mitaky karama tsara kokoa izy ireo. Ny alina lasa teo, mpitrandraka harena an-kibon'ny tany miisa 800 no nifandona tamin'ireo mpitandro ny filaminana izay niezaka handrava ny fitokonana. Nanapa-kevitra ny hampiato ny famokarana ny Toeram-pitrandrahana Escondida androany. Manazava ny fiantraikan'ity fanapahan-kevitra ity i Esther Croudo (ES) :
“..Since August 7 at 7:00 in the morning Escondida Mine stopped production; the copper mine with the highest production in the world, that represents 8% of the world production and the 23.5% of the Chilean production, which contributes 2.5% in the gross domestic product.
“..Niato tamin'ny famokarana ny Toeram-pitrandrahana Escondida nanomboka ny 7 aogositra tamin'ny 7 ora maraina; ahitana ny vokatra betsaka indrindra manerana izao tontolo izao ny fitrandrahana varahina, izay maneho ny 8%-n'ny famokarana manerantany ary ny 23,5%-n'ny famokarana Shiliana, izay manome ny 2,5% amin'ny harinkarena faobe ao an-toerana.
Androany ny andro fitsaharana ofisialy na dia mbola mitohy aza ny asa sasany . Manohy manazava izany izy:
more than 2000 unionized workers at the mine demanded that the salary’s and benefits should reflect the actual high price of the “red gold.” When have we seen an average prize of US $3 per pound?”
sendikan'ny mpiasa mihoatra ny 2000 ao amin'ny toeram-pitrandrahana no nangataka fa tokony ho hita taratra amin'ny vidin'ny “volamena mena” lafo vidy amin'izao fotoana izao ny karama sy ny tombontsoan'ny mpiasa. Oviana isika no nahita ny tombatombam-bidy 3 dolara amerikana isaky ny 1 livra? “
Nanoratra i tocopilla online (ES) mikasika ny antony naharesy lahatra ny orinasa hampiato ny famokarana:
“the enterprise said that the insecurity was provoked by the striking miners plus the obstacles in the roads that lead to the ore deposits. The loss of the Escondida Mine is US 100 million dollars”
“Nilaza ny orinasa fa avy amin'ny mpitrandraka nitokona ny tsy fandriampahalemana, miampy ny sakana teny an-dàlambe izay mitondra mankany amin'ny toeram-pitrandrahana. Mitentina 100 tapitrisa dolara Amerikana ny fatiantoky ny Toeram-pitrandrahana Escondida”
16 ora izayKaraiba